Umqeqeshi wePirates uthi akayicabangi nokuyicabanga eyokushiya | News24
Umqeqeshi wePirates uthi akayicabangi nokuyicabanga eyokushiya
Johannesburg – Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uKjell Jonevret, usephawulile ngekusasa lakhe kuleli qembu njengoba kuqhubeka ukuqagula ngokuthi kukhona umqeqeshi ongase avale isikhala sakhe ezinsukwini, kubika iKickOff.com.
Imibiko evela e-Uganda iveza ukuthi u Jonevret uzoqeqesha umdlalo wakhe wokugcina ngci kwiBucs, ezodlala neKaizer Chiefs emqhudelwaneni wangaphambi kokuqala kwesizini, iCarling Black Label Cup, nokuwumdlalo obhekwe ngabomvu ngale mpelasonto, nokwenza iqine imibiko yokuthi lo mqeqeshi ongowokudabuka eSerbia angase ashaye ibuya kule kilabhu.
USredojevic, nobelokhu eqeqesha iqembu lesizwe e-Uganda kusukela ngonyaka ka-2013, waphinde waholela iThe Cranes emdlalweni wamanqamu we-African Nations Cup okokuqala eminyakeni engu-38 ngo-2016, kuyimanje usesekhefini njengoba kuqhubeka ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe ne-Ugandan FA ngenxa yeholo nebhonasi.
OLUNYE UDABA:Kuzoqala isizini iPirates isinomqeqeshi omusha - Umbiko
Lo mqeqeshi waseSweden uyavuma ukuthi ikusasa lakhe aliqinisekisiwe kumaBhakabhaka nokuthi akanaso isiqiniseko sokuthi uzobe esekhona yini kuleli qembu uma ngabe kuqala isizini entsha ye-PSL.
Kodwa-ke uthi yena nethimba lakhe labaqeqeshi bagxile emsebenzini, futhi abakunakile nokukunaka ukuqagula kwabezindaba.
“Ngicabanga ukuthi siyithimba labaqeqeshi elihle njengamanje. Sesinqume ukuthi asikwazi ukufaka amandla ezintweni esingeke sizilawule, ngakho sizama ukuza la [ejimini] zonke izinsuku bese senza okusemandleni ethu – leyo ukuphela kwento esingayenza.
“Ngicabanga ukuthi sesisebenze kanzima kakhulu sindawonye. Mayelana nekusasa lami, anginandaba kakhulu, sengibe kuleli bhizinisi isikhathi eside.
“Ngiyazi, usuku engiyoshiya ngalo la, ngizothi kumina, ‘Umsebenzi omuhle Kjell! Usuwenze umsebenzi omuhle kakhulu obungawenza futhi usungabuyela eceleni.
“Ngakho angicabangi kakhulu ngalokho, ngiza lapha zonke izinsuku, ngizama ukwenza okuphezulu namhlanje, ikusasa kanye nayizolo, futhi lokho ukuphela kwento engiyicabangayo njengamanje.”